PHP ကို – တေလာ Lopes ツဘလော့
တေလာ Lopes ツဘလော့
ကွန်ပျူတာများ & သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ
Composer မပါဘဲ mPDF ကိုတပ်ဆင်ပါ – PHP ကိုအတူ PDF ကိုအစီရင်ခံစာများ
အဆိုပါ mPDF အနိမ့်သင်ယူမှုကွေးနဲ့အတူ CSS ကို / HTML ကိုကနေ PDF ကိုထုတ်ပေး. ဒီမှာစိတ်ကူးက composer ကို server ပေါ်မှာ install လုပ်စရာမလိုပဲ mPDF ကိုလုပ်ဖို့ပါ. တေးရေးဆရာသည်ဒေသအလိုက်အသုံးပြုမည်ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းဆာဗာသို့ပေးပို့မည်.
ဖတ်နေ Continue →
18 သြဂုတ်လ 2017 တေလာ Lopes	တေးရေးဆရာ, mpdf, PHP ကို, အစီရင်ခံစာများ	1 မှတ်ချက်
ဖြေရှင်း “ဒါကအဆင်မပြေဖြစ်ပါသည် / 404 တွေ့မရအမှား” တပ်ဆင်ပြီးနောက် “Zend-ဖော်ပြ”
Middleware နှငျ့အလုပျလုပျ, ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်တင်ရန် “ဒါကအဆင်မပြေဖြစ်ပါသည် / 404 တွေ့မရအမှား” တပ်ဆင်ပြီးနောက် “Zend-ဖော်ပြ”.
10 သြဂုတ်လ 2017 တေလာ Lopes	ဟန်ပန်မကျသော, တေးရေးဆရာ, ဖော်ပြ, los / basepath, middleware, PHP ကို, အများပြည်သူ, Zend, Zend-ဖော်ပြ	1 မှတ်ချက်
သင့်ရဲ့ Zend PHP ကိုအသိမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိရန်မည်သို့
ငါ Zend Certified PHP ကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်ရပြုမည်သို့တစ်ဦးကအကျဉ်းချုပ်နှင့်ကျိုးနွံအကောင့် - ZCPE.
28 မတ်လ 2017 တေလာ Lopes	php လက်မှတ်, စာမေးပွဲ, PHP ကို, စမ်းသပ်, zcpe, Zend, Zend Certified? php အင်ဂျင်နီယာ	16 မှတ်ချက်များ
PHP ကို: e-mail, အတွက် embedded Run ကို script ကိုတင်ပုံရိပ်
ဤသည်အစွန်အဖျားသင်တို့ကိုစေလွှတ် e-mail ကိုဖတ်ပါခဲ့လျှင်သိရန်လိုသူမည်သူမဆိုများအတွက်အသုံးဝင်သည်. ဤကိစ္စတွင်အတွက်, အီးမေးလ်မက်ဆေ့ခ်ျကို၏ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင်ပုံတစ်ပုံကိုထည့်သွင်း, ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့်အခါ, ဝေးလံခေါင်သီ server ပေါ်တွင်တစ်ဦး script ကိုဖြစ်ပေါ်ပါလိမ့်မယ်.
25 ဇန္နဝါရီလ 2013 တေလာ Lopes	ဇာတ်ညွှန်း executar, image ကိုဇာတ်ညွှန်း, script ကို e-mail,	8 မှတ်ချက်များ
PHP ကို: QRCode image ကို Google မှ API ဖြင့် Generate
အဆိုပါ QRCode ကျမ်းအဖြစ် Pre-ထူထောင်သတင်းအချက်အလက်င်တစ်ဦး 2D ဂရပ်ဖစ်ဖြစ်ပါသည်, URL များကို, SMS သို့မဟုတ်အဆက်အသွယ်များနှင့်ဖုန်းနံပါတ်များ.
1 နိုဝင်ဘာလ 2012 တေလာ Lopes	arohamQR, ဇယား google, QR ကုဒ်ကို, qrcode	1 မှတ်ချက်
ပုံစံ “Android အတွက် PHP ကို” (PFA)
Android အတွက် PHP ကိုတစ်ဦးစီမံကိန်းဖြစ်ပါတယ် “ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်” ကျနော်တို့က Android အတွက် PHP ကိုဖှံ့ဖွိုးတိုးတမသာဖြစ်နိုင်သမျှဖြစ်စေလို, ဒါပေမယ့်လည်းဖြစ်နိုင်ကိရိယာများနှင့်စာရွက်စာတမ်းများပေးအပ်.
21 အောက်တိုဘာလ 2012 တေလာ Lopes	PFA, php anddroid, android ဖုန်းများအတွက်? php	မှတ်ချက် Leave
PHP ကို: မှန်ကန်စွာအက္ခရာနံပါတ်ပါတဲ့စစ်ခင်းကျင်း sorting?
အက္ခရာများနှင့်နံပါတ်များကိုနှစ်ဦးစလုံးပါဝင်တဲ့ညှို့တစ်ခုခင်းကျင်းအမိန့်ကိုဘယ်လိုလေ့လာပါ. အက္ခရာနံပါတ်ပါတဲ့စစ်ခင်းကျင်းအွမ်မိန့်-se ကြိုးစားပါ, နှုန်းထားများစောင့်ရှောက်ခြင်း, သင်မူကားလက်ျာအမှုကိုပြုလျှင်, ရလဒ်မျှော်လင့်ထားလို့မရနိုင်ပါ.
18 အောက်တိုဘာလ 2012 တေလာ Lopes	ခင်းကျင်းလူ့အမိန့်, ခင်းကျင်းမှာသဘာဝအမိန့်, natcasesort, natsort, မျိုးခင်းကျင်း, usort	မှတ်ချက် Leave
PHP ကို: ဇစ်ကုဒ်လိပ်စာအားဖြင့်ရှာရန် – စာတိုက်
ဤသည်မှာ PHP class ဖြစ်ပြီး HTTP တောင်းဆိုမှုကို Correios WebServer သို့ပို့။ လိပ်စာပြန်ပို့သည်, ရပ်ကွက်ထဲ, တည်နေရာနှင့် UF ရိုက်ထည့် zip ကုဒ်အပေါ်အခြေခံပြီး.
15 အောက်တိုဘာလ 2012 တေလာ Lopes	အများသူငှာနေရာ, အများသူငှာနေရာ, curl cep, curl cep	9 မှတ်ချက်များ
WampServer – PHP ကို 5.3 အီး Firebird 2.5 [ပြေလည်]
PHP ကိုဆက်သွယ်မှုထူထောင်ပြဿနာများ 5.3 အီး Firebird, utilizando ဏ ou WampServer Xampp? Tavez ဒီ post ကိုကူညီနိုငျ. ထွက် Check!
23 ဒီဇင်ဘာလ 2010 တေလာ Lopes	မီးဘေး, PHP ကို 5.3, ဆက်သွယ်မှုပြproblemနာ, Wampserver, Xampp	39 မှတ်ချက်များ
CAPTCHA – Web ပေါ်ရှိလူနှင့်ကွန်ပျူတာများကိုခွဲခြား
programming ကို PHP ကို: CAPTCHA တစ်ဘုံအမျိုးအစားတစ်ခုပုံမှန်မဟုတ်ဘဲစူးနေတယ်ပုံရိပ်၏အက္ခရာများကိုသိရှိနိုင်ဖို့အသုံးပြုသူလိုအပ်ပါတယ်. ကွန်ပျူတာများကိုသန်နိဋ်ဌာနျလေ့အဖြစ်, တစ်မှန်ကန်သောဖြေရှင်းချက်တင်သွင်းသူအသုံးပြုသူလူ့ဖြစ်ဖို့ယူဆနေသည်.
17 နိုဝင်ဘာလ 2009 တေလာ Lopes	captcha, captcha.class.php, အတုထောက်လှမ်းရေး	မှတ်ချက် Leave
အင်တာနက်ပေါ်ရှိမြေပုံများအားဝင်ရောက်ဖို့ GPS စနစ် Tracker configure ဒါကြောင့်သင်ဟာအင်တာနက်ကိုကျော်သင့်ကားကိုခြေရာခံရန်လိုအပ်ပါတယ်, လမ်းကြောင်းသည်အောက်ပါ, Real-time အမြန်နှုန်းနှင့်တည်နေရာ? ဒါမှမဟုတ်စိတ်ကပိုငြိမ်းချမ်းရေးဘယ်မှာတစ်စုံတစ်ဦးကသင့်မိသားစုအတွက် သိ. ရ? ဒီအထဲက Check! Introdução Hoje e...
CTRL + C ကိုအီး CTRL + V ကို entre ကို Windows ကeVM က Linux ကိုအဘယ်သူမျှမရဲ့ Virtual Box ကို Windows ကို Desktop နဲ့ Debian virtualized အကြား Copy ကူး / Paste အဖြစ်? အဆိုပါသိသာဖြေရှင်းချက်ကိုထည့်သွင်းဖို့ပါလိမ့်မယ် "ဧည့်ထပ်တိုး" Oracle က VM က VirtualBox ပြုပါ, ဒါပေမယ့်အဘယျသို့ကအမှား generate လုပ်တဲ့အခါအကြောင်းကို "ဝန်ဆောင်မှုကို set up ရန်မအောင်မြင်ခဲ့ပါ vboxadd"? Introdução Antes de ma...
သာ .frm နှင့် .ibd ဖိုင်တွေရရှိနိုင်သည့်အခါက MySQL ကျောက်ပြားကို Recover ဘယ်လိုဖြေရှင်းပေးရန် "က MySQL အမှား #1146 - စားပွဲတင်မတည်ရှိပါဘူး" ဖိုင်တွေရွေ့လျားကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ .idb (InnoDB) တိုက်ရိုက် directory များအကြား (tablespace). Problema Muitos dos problema que temos são problemas que criamos. ကိုယ့်တဦးတည်းလုပ်ချင်ပါတယ် ...
အင်္ဂလိပ်စာသင်ယူ: ဘယ်မှာစတင်ရန်? လိုအပ်နှင့်အင်္ဂလိပ်စာသင်ယူချင်သောသူတို့အဘို့လင့်များနှင့်အကြံပြုချက်များ၏စုစည်းမှု, ပိုက်ဆံထက်ပိုချွေးဖြုန်း. Introdução Certamente eu não souapessoa mais indicada para dizer como você deve aprender um idioma, အိုကေ? ဒါပေမယ့်ငါက inter ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်ခဲ့တယ် ...
ကို USB Device ကိုအသိအမှတ်ပြုသောမ – ပုံနှိပ်စက် [ပြေလည်] ဒါဟာစံချိန်ကျိုးနပ်သည်! ယနေ့နှစ်ခုဘက်စုံသုံးပရင်တာ HP ကတူညီတဲ့ပြဿနာရှိခြင်းကြောင့်ငါသည်ဤသို့ဆို: "ကို USB Device ကိုအသိအမှတ်ပြုသောမ". ရှင်းလင်းသော, သင်ဒီမှာတွေ့ပါဖြေရှင်းချက်! Problema Cena do crime: နှစ်ဦးပုံနှိပ်ခြင်း ...
စော်ကားသော WordPress ကိုထိန်းသိမ်းထား | အကွောငျး: အားဖြင့် Sorbet WordPress.com.
မူပိုင်ခွင့် © 2022 taylorlopes.com အောက်တိုဘာလကတည်းက 2012, 3.646.021 ဝင်ရောက်ခွင့်
"ငါ့ကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူနှင့်ငါ့ပိုင်နက်ချဲ့ရန်, ငါ့ကိုသင့်လက်၌ငါနှင့်ဆိုးသောထိနျးသိမျးင် - ငါ CR 4:9"